May 30, 2012 - Written by Nairobi:-Afhayeenka ciidamada Booliiska Kenya Eric Kiraithe ayaa shirJaraa,id ku qabatay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa soo bandhigay sawir nin ka yimid gudaha dalka Soomaaliya sida uu sheegay Eric Kiraithe kaas oo dhalashadiisu tahay dalka Turkiya.
Eric Kiraithe ayaa sheegay in ninka ay sawirkiisa soo bandhigeen uu ahaa xubin aad u firfircoon oo ka mid ah Ururka Al-Shabaab wuxuna sheegay in uu dhigay Bamka dukaan ku yaal wadada Moi Avenue ee bartamaha magaalada Nairobi .Afhayeenka ciidanka Booliska ayaa sheegay in ninka lagu tuhmay in bamka uu shigay la yiraahdo Emrah Erdogan.
Afhayeenka ciidamada Booliiska Kenya Eric Kiraithe ayaa mar ay saxaafada weydiisay in ay hayaan cadeymo la isku haleyn karo wuxuu sheegay in ay hayaan cadeymo buuxda wuxuuna sheegay in Emrah Erdogan uu haatan ku dhuumaaleysanyo gudaha dalka Kenya .
Waxaa jira dada badan oo ay ciidamada Kenya u qabteen tuhun kuwaas oo lagu xiriirinayo in ay xiriir dhow la leeyihiin Ururka Al-Shabaab ;waloow qaarkood ay yihiin dad qoxooti aan waxba galabsan.
ilaa haatan ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay dowlada Turkiga oo ku saabsan sheegashada ciidamada Booliska ee dalka Kenya iyo Ururka Al-Shabaab.